Akụkọ - Gịnị Bụ Ogwe Ntọala?
Kedu ihe bụ ntọala ala?
Ogwe aka nke ala bụ ihe nkwụnye nkwụnye nke dị n'ime ala. Enwere ike ime ụdị a ụdị maka plọg dị iche iche, mana a na-ejikarị ya maka njikọ eletriki, ekwentị, ma ọ bụ eriri. A na-achịkwa ojiji nke ala ala site na koodu iwu n'ọtụtụ ebe.
Ogwe eletriki ma ọ bụ oghere eletrik na-adịkarị na mgbidi.
N'ọtụtụ ọnọdụ, eletriki na ụdị ntọala ndị ọzọ ma ọ bụ ntanetị dị na mgbidi ma ọ bụ na bọọdụ. N'ime ụlọ obibi ma ọ bụ ụlọ azụmahịa, ọkọlọtọ ndị ahụ na-adịkarị obere ala karịa ala ma nwee ike idowe n'elu tebụl n'elu ime ụlọ ịwụ na kichin. N'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-etinye ọtụtụ n'ime ụdị mpempe akwụkwọ a na mgbidi ma ọ bụ n'osisi ndị dị nso igwe. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, oghere ala dị mma n'ihi na ọ na-egbochi ịgbanye eriri dị n'akụkụ ebe ha nwere ike ibute ọdachi.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịmebe ime ụlọ ebe obibi n'ụzọ agaghị ekwe ka etinyere ihe ndina na mgbidi na-enweghị mgbochi ịbanye n'ọnụ ụlọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ chọrọ itinye oriọna na-agụ ihe n’otu akụkụ ihe ndina ya, ọ ga-agbagharị ụdọ ahụ n’elu ala gaa ebe ọkụ eletrik dị nso. Nke a nwere ike ọ gaghị adọrọ mma. O nwekwara ike bụrụ ihe egwu na anụ ụlọ ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ ga-adaba na eriri, nke nwere ike imebi ma onye na-eme njem ma oriọna. Ntinye nke oghere ala n'akụkụ ihe ndina ya na-ewepụ nsogbu a.
Akụkụ ntụgharị nke mkpụrụ ego ahụ bụ na plọg etinyere na ntọala ala edobere nke ọma nwere ike bụrụ ihe ọghọm njem n'onwe ha. Nke a bụ eziokwu karịsịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke azụmahịa ebe ibu ọrụ na-emetụta mgbe niile. Ọtụtụ ndị na-echekwa ntọala ụlọ dị iche iche ka ha bute ihe egwu dị egwu karịa ntọala mgbidi.
Wụnye oghere nke ala n'oge ọrụ ọhụụ nwere ike ịbụ aghụghọ na n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa. Ọtụtụ koodu iwu na-amachibido ntinye nke ala ala kpamkpam. Ndị ọzọ na-enye iwu ka etinye ha naanị na ụlọ siri ike dị ka tile ma ọ bụ osisi ma ọ bụghị na ala dị nro dị ka kapet. Ndị ọzọ na-ekwe ka ebe a na-ere ihe n ’ụlọ ebe a na-arụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ bụghị n’ebe obibi ma ọ bụ nke azụmahịa, ebe ndị ọzọ na-ekwu ihe megidere nke ahụ.
Nweta ma ọ bụ wụnye ntọala ala na ụlọ dị ugbu a nwere ike ọ gaghị ekwe ma ọ bụ koodu. Ọ bụrụ na ọ dị, koodu ahụ nwere ike ịchọ ka ọrụ eletrik nwere ikike rụọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na koodu obodo na-enye ohere itinye ntọala ala, onye nwe ụlọ ahụ kwesịrị icheta na ntinye dị otú ahụ nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ọkụ eletrik enweghị ike ịnweta n'okpuru ala ahụ, dị ka nke ala simenti. Ọ bụrụ na ala dị na ọkwa nke abụọ, akụkụ nke uko ụlọ dị n'okpuru nwere ike iwepụ iji wụnye oghere.
Post oge: Ọgọstụ-25-2020